Linux Mint 19 Tara inosvika nenhau, zvigadziriso uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Zvakanaka, iyo nhau haina kumirira zvakare uye ikozvino tinogona kutaura kuti tine vhezheni itsva yeLinux Mint pakati pedu saka isu yakasimbiswa naClement Lefebvre mutungamiri weprojekti uye pamwe chete neboka rake rekusimudzira akazivisa kuti izvozvi zvave kuwanikwa pamaseva epamutemo.
Iyi itsva vhezheni yeLinux Mint 19 Iyo inouya pasi pekodhi zita "Tara" uye iyi inguva refu yekutsigira vhezheni iyo inotsigirwa kusvika 2023. Iyo inouya neakagadziridzwa software uye mazhinji many maficha.
Iyi vhezheni itsva yeLinux Mint 19 «Tara» Iyo yakavakirwa paUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver uye ine Kernel 4.15 semoyo weiyo system. Zvakare, izvo, zvinoenderana neshanduro yeLinux Mint yaunosarudza Unogona kuwana Cinnamon 3.8, MATE 1.20 uye Xfce 4.12 mune akasiyana mafiros ekugovera uku.
1 Chii Chitsva muLinux Mint 19 Tara
2 Chii Chitsva muLinux Mint 19 Tara Cinnamon
3 Chii chitsva muLinux Mint 19 Tara Mate
4 Dhawunirodha Linux Mint 19 Tara
Chii Chitsva muLinux Mint 19 Tara
Pindai iwo makuru matsva atingawana tinogona kusimbisa chishandiso chitsva kugadzira system backup inonzi timeshift.
Naiwo maLinux Mint vagadziri ivo vakaisa kwatinogona chishandiso chekugona kudzoreredza iyo system pakombuta yedu. Zvakanaka, chishandiso ichi chinogadzira akasiyana ekudzoreredza mapoinzi atinogona kudzoka kana tingave nedambudziko nesystem.
Iyo software maneja wekugovera yakagamuchirawo kugadzirisa, Zvakanaka, mumashandisirwo emushandisi, dhizaini yakanga yakabwinyiswa uye mifananidzo yekuchinja yakawedzerwa.
Yekhibhodi yekufambisa yakavandudzwa, pasuru uye kutsvagisa kwekushandisa zvino zvave kukurumidza, asynchronous, uye izvozvi zvinotsvaga mukati memapoka.
Uyewo, yakagadzira cache yemukati yeAPT uye Flatpak paLinux Mint. Iyi cache inopa isingabvumirwe dura kuitira kuti zvishandiso seSoftware Manager zvigone kubata APT uye Flatpak nenzira imwechete, pasina kunetseka nezve mutsauko wavo.
Iyi cache inogona kuve inogona kushandiswa nemamwe maficha mune ramangwana, senge menyu kana iyo Yekuvandudza Maneja.
Kwakawanda kuyedza kwakaitwa kuwedzera cache kushanda. Izvi zvinoguma kuvhurwa kweSoftware Manager kunyangwe nekukurumidza kupfuura pakutanga.
Zvekuita uye zviratidziro zvemitoro zvakagadziridzwa. Iye zvino zvave nyore kuteedzera zviitiko zvekumashure.
Chii Chitsva muLinux Mint 19 Tara Cinnamon
Mune iyi vhezheni yekugovera ne ino desktop desktop ichavandudza mashandiro eizvi pachirongwa, kubvira vagadziri pavakatanga kushanda pamabhodhoro nekumhanyisa bvunzo dzakasiyana.
ari nyowani nyowani dzinotaridzika dzakachena uye pamwe nekuvandudza kwekuita vanoita kuti Chinamoni chinzwe kunonoka kupfuura pakutanga.
Iko kugadzirisa mashandiro atinogona kuwana ndeaya:
Thanks kusimudzira kune libnemo-kuwedzera uye nemaonerwo anoitwa, Nemo inokurumidza kuratidza zvirimo mudhairekitori.
Nemo haisisiri lags kana uchifambisa mafaera kuburikidza ne USB zvishandiso.
Kuvandudzwa kunoendeswa kubva kuGNOME kunodzora kutaridzika kweiyo yakazara-danho redraws muCinnamon.
Chii chitsva muLinux Mint 19 Tara Mate
Iyi vhezheni yatoverengera nerutsigiro rweHiDPI inoratidzira ine simba rekuona uye kuyera, the Tsigiro yeDRI3 uye XPresent akawedzera izvi zvinoguma zviri nani furemu mitengo kana uchitamba mitambo.
ari Cursor makiyi anogona kushandiswa kufamba kuAlt-Tab sarudza uye mapfupi ekhibhodi ekufambisa windows kune vamwe vatariri.
El MATE terminal ikozvino inotsigira kumashure mifananidzo, Misoro mitsva yeSolarized uye musanganiswa wakakosha kuti uchinje matabhu.
Ukuru hwemapuraneti applet hwakanyatsoenderana nemayuniti anoratidzwa, uye machati mazhinji akayerwa zvine simba.
Engrampa, muoni wefaira akagamuchira rutsigiro rwakagadziridzwa rwemafaira akavanzika e7z
Dhawunirodha Linux Mint 19 Tara
Kana iwe uchida kudhawunirodha vhezheni nyowani yekuparadzirwa kweLinux, unogona kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti yeprojekiti uko iwe kwaunogona kuwana mufananidzo weiyo system pamwe nedesktop nharaunda yaunosarudza. Iyo chinongedzo ndeichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Linux Mint 19 Tara inosvika iine nhau, zvigadziriso nezvimwe
Bernardo S. Gtz akadaro
Wakambozviedza here? Ndakaiisa muVM uye sezviri pachena zvese zvakanaka. Ndiri kuenda kuyedza iyo palaptop, asi ndinoda kunyora kana paine chero zvipembenene zvakawanikwa uye kuti zvinogadziriswa sei.
Ini ndinoda izvo zvinotounza vhezheni 6 yerefreoffice.
Pindura Bernardo S. Gtz
Ndakaisimudza asi ini handina odhiyo, mumwe munhu kuti andipe ruoko
Ndakaiyedza pabhuku diki rine 2GB ye RAM mune Matte vhezheni uye inoshanda zvakakwana. Inotyisa kwazvo, mashandisiro acho akakwana uye chokwadi ndechekuti kana iwe uine rutsigiro rwehunyanzvi kusvika 2023 haufanire kuibata